Benim UZMANLIK alanim / Ny asako – Diyaloglar | OpenTran
Benim UZMANLIK alanim / Ny asako – Diyaloglar
Çevirmen & Sözlük çevrimiçi Türkçe-madagaskarlı çeviri Benim UZMANLIK alanim / Ny asako – Diyaloglar
Adama: Salama, Julia! Manao ahoana ianao?
Julia: Salama, Adam! Salama aho fa misaotra! Ary, manao ahoana ianao?
Adama: Tsara tokoa, misaotra! Somary manahy fotsiny ny amin'ny fanadinana ho avy.
Julia: Fa maninona? Sarotra be ve ny handalo?
Adam: Tsia, tsy hiteny aho hoe sarotra be izany, saingy tena ilaina amin'ny asa ho avy io.
Julia: hitako. Mampiahiahy momba ny biolojia ve ianao?
Adam: Ie, tena mila marika tsara amin'ity fanadinana ity aho satria te hiditra amin'ny oniversite fitsaboana.
Julia: Tadidiko fa nikasa ny hianatra momba ny fitsaboana ianao. Inona no mahaliana ao? Raha ny hevitro dia asa sarotra be ny miatrika aretina isan-karazany amin'ny olombelona.
Adama: Marina ny anao. Tsy noeritreretiko ho mora izany. Fa fantatro tsara fa ny miasa amin'ny sehatry ny fitsaboana dia mahaliana sy mahasoa. Rehefa mieritreritra aho fa aorian'ny fianarana an-taonany maro dia ho afaka hitsabo ny olona manodidina ahy aho, dia te hianatra mazoto kokoa aza. Ankoatr'izay dia liana amin'ny fanavaozana isan-karazany aho. Tsara raha afaka manao ny hitako manokana amin'ny fitsaboana aho.
Julia: Toa tsara! Ary, efa nifidy ny saha marina ve ianao? Ny tiako holazaina dia hoe te-hiasa amin'ny fitsaboana nify, gastroenterology, traumatology na sehatra hafa ve ianao?
Adama: Ie, fantatro izay tianao holazaina. Te-ho dokotera manetry tena aho, satria ny asan'ireto olona ireto dia mitaky fahalalana betsaka saika amin'ny sehatry ny fitsaboana rehetra. Tokony hahafantatra olana ara-pahasalamana maro izy ireo.
Julia: hitako. Safidy tsara izany.
Adama: Ampahatsiahivo azafady, azafady, inona no nofidinao fa vita ny fianaranao?
Julia: Te handeha hianatra amin'ny lalàna aho. Nisisika mafy ny ray aman-dreniko.
Adama: Tsy faly amin'ny safidin'izy ireo ve ianao?
Julia: Karazana. Te ho mpanakanto foana aho. Fantatrao, tena tiako ny manao sary. Saingy nilaza ny raiko fa ny maha-mpanakanto dia fialamboly kokoa noho ny tena asa. Nilaza izy fa afaka misintona amin'ny fotoanako malalaka mba hahazoana fahafinaretana fotsiny.
Adama: mety marina ny azy. Na izany aza, raha tsy te ho mpisolovava mihitsy ianao dia aleo mandà izao.
Julia: Tsia, tsy maninona. Manana tombony be dia be koa izy io. Indraindray ny mpisolovava dia miatrika olona mahaliana sy tranga mahaliana. Mety ho tiako ny fizotry ny famotorana na ny fifampiraharahana amin'ny fitsarana.
Adam: Toa mahaliana ihany! Heveriko fa tokony handalo fampianarana ara-tsosialy hiditra amin'ny City Law School ianao, marina ve izany?
Julia: Ie, marina izany. Somary mitebiteby ihany koa aho alohan'ny fanadinana. Na izany aza, mieritreritra aho fa hanao tsara ihany.
Adam: Misaotra anao nampifaly ahy! Mahatsiaro ho salama tsara kokoa aho izao.
Julia: Tsy misy olana! Afaka miresaka momba izany isika amin'ny fotoana rehetra.
Haberler Ny vaovao
Nerede çalışıyorsun? Aiza ianao no miasa?
Öğretmen ve Öğrenci Arasında Eo anelanelan'ny mpampianatra sy ny mpianatra
Sekreter Telefona Cevap Veriyor Sekretera mamaly ny telefaona